Shiinaha Ayaa Ku Daadanaya Muraayadaha Ku Xidhmada BS6088B Soosaarka iyo Warshadda | OLAN
Joogitaanka joogga muraayadda muraayadda dushiisa oo ka tarjumeysa laydhadhka baabuurta, mootooyinka iyo baaskiiladaha, kuullada calaamadaha waddada ayaa loo adeegsadaa in lagu hago dadka isticmaala waddooyinka mugdiga. Markaad baabuur wadid habeenkii, nalka hore ee gaadhiga waxaa dib loogu soo celinayaa isha darawalka, markaa darawalku wuxuu si cad u arki karaa wadada hormarta wuxuuna ku wadi karaa si nabad ah. Kuulku si uu iftiinka dib ugu soo celiyo, laba astaamood ayaa lagama maarmaan ah: hufnaan iyo wareeg. Kuul ka sameysan muraayad ayaa leh labadaba sifooyinkan. Baahida loo qabo daahfurnaanta iyo wareegga ayaa loo arki karaa inay muhiim tahay haddii aad raacdo dariiqa iftiinka maaddaama ay geleyso kuul ku duuban calaamadda waddada la mariyo. Kuusha dhalada waa inay noqotaa mid hufan si iftiinka ugu gudbi karo ugana bixi karo. Marka raajada iftiinka ay gasho kuusha waxaa dib u hagaajiya dusha sare ee kuusha oo ah halka uu ku duuban yahay rinjiga. Iftiinka garaacaya dhabarka dusha sare ee rinjiga daboolan ayaa ka muuqda dusha rinjiga, iyo qayb yar oo iftiinka ah oo dib ugu laabanaysa isha iftiinka.
Si loo hubiyo heer sare oo muuqda dhammaan xaaladaha cimilada, Olan waxay soo saartay noocyo kala duwan oo dhalo ah oo ku habboon nooc kasta oo dalab ah.
Waxaa jira laba darajo oo caadi ah inta lagu gudajiro codsiga: Premix iyo Drop-on
Premix (Intermix), waxaa lagu qasi jiray rinjiga kahor intaan wadada laga bixin. Maaddaama lakabyada rinjiga ay xiran yihiin, kuulku waa la soo bandhigaa iyadoo la siinayo aragti sare oo calaamadaha waddooyinka ah.
Drop-On, ayaa loo dejin jiray dusha rinjiga cusub ee rinjiga ee wadada si loo siiyo aragti deg deg ah kor u qaadista wadayaasha habeenkii.
Muuqaalka maalintii iyo sidoo kale inta lagu jiro habeenkii xaaladaha cimilada kala duwan, waxqabadka ka hortagga taraafikada, iska caabbinta iyo adkeysiga ayaa ah astaamaha lagama maarmaanka u ah calaamadaha waddooyinka wanaagsan. Olan waxay soo saartaa kuul muraayadaha nooc kasta oo alaabooyinka calaamadeynta waddooyinka ah sida dareeraha ku saleysan dareeraha - iyo rinjiga biyaha, thermoplastics iyo 2 nidaamyada ka kooban.
Hore: 1.7nd Muraayadaha Kabaha ee Calaamadaha Wadada
Xiga: Kuusha Dahaarka leh ee Calaamadaha Wadada
Ku shub Muraayadaha Ku Xidhmada Bs6088b
Ku Tuur Muraayadaha Ku Xidhmada ah Rinjiga Calaamadaha Wadada
Ku Tuur Nooca Muraayadda Muraayadda
Muraayadaha Muraayadaha Tj
T446-2001 Udaadi Calaamada Wadada